Ngathi-iShijiazhuang Shencai Pigment Factory
Shijiazhuang Shencai zombala Factory owasekwa ngo-2003 Sine enkulu Iron oksidi sombala Production Base (Hebei Chengyu sakhi Co., Ltd), ibekwe e Ningjin Salt Chemical Industrial Park, kwiPhondo Hebei, na imichiza park park mveliso, ngokusemthethweni imveliso. Ngeendlela ezintathu zemveliso, amandla emveliso angamawaka eetoni ezingama-50,000
Ukuveliswa kwentsimbi ebomvu oksayidi, i-iron oxide etyheli, i-iron oxide emnyama, i-iron oxide eluhlaza kunye nezinye i-iron oxide series pigments, ezisetyenziswa kakhulu kwipeyinti yokupeyinta, izinto zokwakha, irabha yeplastiki kunye nencam yombala esekwe emanzini, ukwakha izinto zokuhombisa umphezulu. Iqela le-R & D lobuGcisa kunye neLebhu yeLebhu, usebenzisa izixhobo zovavanyo eziphambili, ukuqinisekisa ukuveliswa kwebhetshi nganye yemveliso esemgangathweni ozinzileyo. Usihlalo uGu zhihe wamkela abantu abavela kuzo zonke iinkalo zobomi ukuba batyelele umzi-mveliso baxoxe kwaye bafune uphuhliso olufanayo. Siya kuba lelona xabiso liphezulu kunye nenkonzo esemgangathweni esemgangathweni sibuyele kubathengi abadala nabatsha.
Shijiazhuang Shencai sombala yasekwa ngo-1985
Isiseko sokuqala semveliso ye-oxide etyheli yasekwa ngo-2004, ebekwe eGuzhuang Industrial Park, kwiDolophu yaseShangzhuang, kwiSithili saseLuan, eShijiazhuang, kunye nemveliso yonyaka yeetoni ezili-10000.
Ngo-2016, ekuphenduleni umgaqo-nkqubo wesizwe ukhuselo lokusingqongileyo, isiseko esitsha imveliso yesinyithi oxide yasekwa Ningjin ityuwa kushishino imichiza epakini. .Kwakuloo nyaka, isebe elibhalisiweyo i-Hebei Chengyu Pigment Co., Ltd.
Ngo-2017, imveliso yonyaka iitoni ezingama-50000 yesiseko yemveliso oxide yentsimbi yafakwa ngokusesikweni ukusebenza, kubandakanywa imigca yemveliso yesinyithi oxide ezintathu. Umgca wemveliso yentsimbi oxide tyheli, intsimbi imveliso oxide umgca obomvu, intsimbi imveliso umgca oxide emnyama.
Kwi-2020, siya kuphucula ngokubonakalayo izixhobo zokhuselo lokusingqongileyo kunye nokuguqula iindibano zocweyo zokuvelisa.